सन्नी लियोनीलाई पक्राउ गर्न माग राख्दै सुरु भयो अभियान, के गर्लिन अब उनी ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ मनोरंजन/सन्नी लियोनीलाई पक्राउ गर्न माग राख्दै सुरु भयो अभियान, के गर्लिन अब उनी ?
सन्नी लियोनीलाई पक्राउ गर्न माग राख्दै सुरु भयो अभियान, के गर्लिन अब उनी ?
एजेन्सी । बलिउड नायीका सन्नी लियोनीलाई पक्राउ गर्न सामाजिक सञ्जालमा माग उठेको छ । लियोनीको गीत ‘मधुवन मे राधिका नाचे’ रिलिज भएदेखि नै विवादमा परेको छ । म्युजिक कम्पनी ‘सारेगामा’ ले आइतबार आफ्नो गीत ‘मधुवन’ को बोलमा कम्पनीले छिट्टै परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो गीतको विवाद रोकिएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा सन्नीलाई पक्राउ गर्न ग उठिरहेको छ । ट्विटरमा बिहानैदेखि यहि ह्यास ट्या ग ट्रेन्डिङमा छ ।
एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘हिन्दू धर्ममा चो ट पुर्याउने सन्नी लियोनीको गीत ‘मधुवन मे राधिका नाचे’ अझै परिवर्तन गरिएको छैन । बलिउड विरुद्ध कहिले सम्म मौन बस्ने ? तिनीहरूले हाम्रो संस्कृतिलाई निरन्तर न ष्ट गरिरहेछन्। सन्नी लियोनीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ ।
सन्नीको गीतमा हिन्दू भावनामा चो ट पुर्‍याएको आरोप लागेको छ । यो गीत राधामा आधारित छ जसको शब्दलाई धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । यस गीतलाई लिएर मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्रले उक्त गीतको भिडियोले हिन्दूहरूको धार्मिक भावनामा चो ट पुगेको आरोप लगाएका थिए । उनले यो गीतको लागि माफी माग्नुपर्छ र आफ्नो गीत मधुवनमा प्रयोग भएको शब्द ३ दिनभित्र परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै अन्यथा कारबाही हुन्छ । त्यसपछि सारेगामाले भनेका थिए, ‘देशवासीको भावनालाई सम्मान गर्दै तीन दिनभित्र ‘मधुवन’ गीतको शब्द र नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।
उही समयमा, मथुराका सन्तहरू भन्छन् कि राधा उनीहरूको लागि पूजनीय छ। गीतमा सन्नीले अ श्लि ल डान्स गरेकी छिन् । यस्तो अवस्थामा उनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । ‘सरकारले अभिनेत्रीलाई कारबाही नगरे उनको भिडियो एल्बम प्रतिबन्ध लगाएन भने हामी अदालत जानेछौं,’ उनले भने ।
राजीव बलामीको निर्देशनमा ‘तिहारको दान’
बिहे नगरी बच्चा जन्माउन मन छ, बिवाह त से’क्स गर्न लिइने लाइसेन्स मात्र हो : ज्योति मगर
सुशान्तको निधन पछि निकै अप्ठेरोमा परेकी रियाले धेरै पछि लेखिन् यस्तो भावुक शब्द
‘कमेडी च्याम्पियन २’ का विक्की अग्रवाललाई जिताउन सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले दिए पाँच लाख
हिट गीतको रिमेकमा सागरको दाउ, फिमेल भर्सनको भरोसामा पल